+7/ 9584-983-763တွင်fo@soccerbအီးtshoot ။cအကွောငျး
ယနေ့ FOR အထူးကမ်းလှမ်းချက်
Odds: 10+ အထိ 100+
Odds: 5+ အထိ 30+
အခမဲ့အလောင်းအစားအကြံပေးချက်များသာမန် tipsters အားဖြင့် post ကိုဖြစ်ကြသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ SoccerBetShoot ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကမန်နေဂျာဘောလုံးခန့်မှန်းချက်အပေါ်အခြေခံကြသည်မဟုတ်. သငျသညျဂရုတစိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့နေ့စဉ်လောင်းကစားအကြံပေးချက်များနှင့်ဟောကိန်းများသုံးနိုင်ပါသည်.
ရီးရဲလ်နှင့် Cadiz CF ( မူလစာမျက်နှာအနိုင်ရရှိ & 1.90 )
ကျွမ်းကျင်သူအကယ်စင်စစ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြိုတင်ခန့်မှန်း GET နှင့် Win
SoccerBetShoot သေချာဘောလုံးခန့်မှန်းချက်များနှင့်အကောင်းဆုံးလောင်းကစားအကြံပေးချက်များနှင့်တစ်ဦးသိပ်နိမ့်နှင့်အတတ်နိုင်စျေးနှုန်းများအဘို့အမြင့်မား paid tipsters က်ဘ်ဆိုက်များကမ်းလှမ်း. ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားပွဲခန့်မှန်းသင်ပိုမိုထက်လစဉ်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူအမြတ်အစွန်းကိုအာမခံစေမည် 85%. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်သာစဉ်းစားပါ. သင်၏အချိန်ကို Save နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှင့်သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုတိုးမြှင့် တခုတည်းသော, အထူး နှင့် လက်မှတ် အလောင်းအစားအကြံပေးချက်များကမ်းလှမ်းမှု.
ဤအီးမေးလ်ကိုသင်သုံးနိုငျ [email protected] PayPal ကအတူဆပ်ဖို့, သငျသညျခရက်ဒစ်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်နှင့်အတူ Skrill သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်စျေးဝယ်အိတ်၌သင်တို့၏အလိုဆန္ဒထုတ်ကုန်ဖြည့်စွက်.
အမေရိကန်အပေါ် CONTACT: WhatsApp ကို / Viber ကို +7 / 9584 – 983 – 763
အောက်ပါကမ်းလှမ်းမှုများထဲမှကို select နှင့်သင့်မေးလ်ပေါ်တွင်သင်၏လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိ ကျေးဇူးပြု..
€45.00 – €90.00 ရွေးချယ်စရာကိုရွေးချယ်ပါ
€120.00 – €300.00 ရွေးချယ်စရာကိုရွေးချယ်ပါ
SoccerBetShoot အဓိက Partner
ဘောလုံးခန့်မှန်းချက်များနှင့်လောင်းကစားအကြံပေးချက်များနေ့စဉ်လက်ခံရရှိနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင့်ဆုံးကအနိုင်ဂိုး packages များကိုစာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့်တစ်ဦးအာမခံချက်အမြတ်အောင်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားပွဲခန့်မှန်းနှင့်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးစေ.
အဘယ်ကြောင့် SoccerBetShoot ကိုအကောင်းဆုံးဘောလုံးအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်?
SoccerBetShoot ကျွမ်းကျင်သူပေးအထူးပြုကြောင်းဆိုဒ်များအလောင်းအစားအခြားသူများအကြားတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အလောင်းအစားအကြံပေးချက်များ နှင့်ဘောလုံးပွဲစဉ်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်များ Subscribe. ဖြည့်စွက်အတွက်, စစ်ဆင်ရေး၏နှစ်အနည်းငယ်, SoccerBetShoot ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဦးဆောင်ဘောလုံးအကြံပေးန်ဆောင်မှုများ၏တစ်ဦးအဖြစ်သူ့ဟာသူထူထောင်ထားပါတယ်.
ရီးရဲလ်နှင့် Cadiz CF ( မူလစာမျက်နှာအနိုင်ရ & 1.90 ) 0
Shakhtar Donetsk vs Wolfsburg ( ကျော်လွန် 2.5 ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် & 1.90 ) 0
CFR အ Cluj vs Gaz Metan Medias (2& 1.75 ) 0
Luzern vs ဘေဆယ် (ဘေဆယ် AH -1.25 @ 2.02) 0
ဂျာမနီ2ဘွန်ဒစ်လီဂါ
Dynamo Dresden vs စိန့် Pauli ဝင်း (1 @ 2.00 ) 0
CFR အ Cluj vs ဆိပ်ပျံ့နှံ့ခြင်း (2@ 1.61 ) 0
ဘောလုံးလောင်းကစားခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်အင်တာနေရှင်နယ် Partner ကွန်ယက်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ, ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးများထဲမှဖြစ်လာကြပါပြီ ဘောလုံးခန့်မှန်း အလောင်းအစားက်ဘ်ဆိုက်များ.
ထို့အပြင်အားကစားသတင်းထောက်များ၏ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ယက်အဆက်မပြတ်ဒေသခံတွေ '' ချန်ပီယံနှင့်ပြိုင်ပွဲကနေသတင်းအချက်အလက်အတွင်းမှအရေးကြီးသောနှင့်အလွန်အရေးပါနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ကျွမ်းကျင်သူများကဘုတ်အဖွဲ့ထောက်ပံ့နေသည်. ထို့ကြောင့်ဤအချက်အလက်နောက်ဆုံးမိနစ်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းပါဝင်သည်, အသင်းနှင့်ကစားသမားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်, ဒဏ်ရာနှင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေသည့်အခြားအချက်များတွေအများကြီး.
ငါတို့သည်သင်တို့ကျွမ်းကျင်သူပူဇော် လက်မှတ်ဘောလုံးခန့်မှန်း သငျတို့သညျကြှနျုပျတို့၏ကိုအသုံးပြုရန်အသိပညာမလိုအပ်ပါဘူး အလောင်းအစားအကြံပေးချက်များ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပေးချက်များသုံးစွဲဖို့ SUPER လွယ်ကူသည်! ကျနော်တို့ဘောလုံးခန့်မှန်းချက်များနှင့်လောင်းကစားများနှင့်ကျယ်ပြန့်အင်တာနေရှင်နယ် Partner ကွန်ယက်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသည်. ငါတို့ရှိသမျှသည်အဓိကဥရောပလိခ်နှင့်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင်ကြေးစားလောင်းကစားအကြံပေးချက်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များကို.
အကောင်းဆုံး TIPSTERS နှင့်လေ့လာသုံးသပ်သူများက
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ယက်အဆက်မပြတ်အရေးကြီးသောအတွင်းမှသတင်းအချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ကျွမ်းကျင်သူများကဘုတ်အဖွဲ့ထောက်ပံ့နေသည် fixed ပွဲ ဒေသခံတွေ '' ချန်ပီယံမှသည်. ဤအချက်အလက်သည်လွန်ခဲ့သောမိနစ်အပြောင်းအလဲများကိုလည်းပါဝင်သည်, အဆိုပါကစားသမား၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်, ဒဏ်ရာနှင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေသည့်အခြားအချက်များတွေအများကြီး.
ကျနော်တို့ကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားရှိသည်နှင့်ကြောင့်အနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ရရှိသွားတဲ့ အကောင်းဆုံးဘောလုံးလောင်းကစားအကြံပေးချက်များ သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကျွန်တော်အလောင်းအစား. ဒီသတင်းအချက်အလက်ပျံ့နှံ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အလောင်းအစားငွေကိုအဘယ်သူမျှမကိုက်ညီမှုနိုင်ပါတယ်. တစ်နေ့တဦးတည်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားပွဲခန့်မှန်းအတူထူးခြားသောရလဒ်များမှာရတဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြ. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကြောင့်အပေါ်သို့တည်ဆောက်ဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ကို join နှင့်အကောင်းဆုံးအနေဖြင့်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားအကြံပေးချက်များရ.